Hordhac: PSG vs Real Madrid – Labadan Kooxood Oo Dheelaya Lugta 2aad Ee Wareega 16 CL %
Champions LeagueFranceLatest Sports News
Real Madrid, oo haysata faa’ido 3-1 oo ay kusoo adkaatay lugtii hore ayaa waxay ku wajaheysaa PSG, gurigeeda lugta labaad, waxaana ciyaartaan laga daawan doonaa Geeska Afrika caweysnimada caawa oo Talaado ah.
Neymar, ayaa ah warka weyn ee ku saabsan ciyaartaan, kaasoo aanan garoonka caawa usoo geli doonin kooxda PSG, iyadoona ay macquul tahay in bedalkiisa uu adeegsado macalin Unai Emery ciyaaryahano kale, oo waa weyn.
Sikastaba, Real Madrid ayaa waxay tahay mida ugu cad-cad ee usoo gudbi karta wareega Sideed dhamaadka ee wareega 16-ka Champions League, inkastoo aanan laga hordhici karin natiijada kasoo bixi karta ciyaartaan.
Kooxda Zidane ayaa dib uheleysa ciyaartaan qaar kamid ah, ciyaartoydeeda ugu muhiimsan, kuwaasoo kala ah: Marcelo, Modric iyo Kroos, wuxuuna hogaamiyaha Los Blancos, uu xaqiijiyay inuu ciyaartaan kusoo bilaabi doono.
Macalin Zidane ayaa waxaa loo badinayaa inuu ciyaartaan afka hore kusoo wada bilaabi doono BBC [Bale, Benzema iyo Ronaldo] kadib markii maalmihii ugu dambeeyay uu isla-jaanqaadkooda uu sii fiicnaanayay.
Geesta kale, PSG ciyaartaan ma heli doonto Neymar kadib markii Qaliin dhanka Qancowga ah lagu sameeyay, waxaana macquul in Emery uu bedalkiisa usoo xusho dhowr ciyaaryahano oo ay ugu horeeyo, Di Maria iyo kuwa kale.
Daafaca reer Brazil ee lagu magacaabo Marquinhos, ayaa wuxuu yahay mid gabi ahaanba shaki laga gelinayo taam ahaanshihiisa ciyaartaan waxayna ubadan tahay in wiilkaan uusan dheelin ciyaartaan kadib dhaawac soo gaaray
Daafac: Alves (LB), Silva (CB), Kimpembe (CB), Berchiche (RB)
Khadka Dhexe: Rabiot (LM), Lo Celso (CM), Verratti (RM)
Weerarka: Mbappe (LW), Di Maria (RW), Cavani (ST)
Safka REAL MADRID
Daafac: Carvajal (LB), Varane (CB), Ramos (CB), Marcelo (RB)
Khadka Dhexe: Asensio (LM), Isco (CM), Casemiro (RM)
Weerarka: Bale (RW), Ronaldo (LW), Benzema (ST)
Kulanka: PSG vs Real Madrid
Champions LeaguePSG vs Real MadridUCL